६ महिनामा छक्का हान्ने बैंकहरुलाई चिनौ, एनसीसी, प्रभु, सिभिल, एनआईसी एशिया, माछापुच्छ्रे, सेञ्चुरी र सिटिजन्स बैंकको छलाङ्गः पुराना बैंक पुरानै शैलीमा ? - Aathikbazarnews.com ६ महिनामा छक्का हान्ने बैंकहरुलाई चिनौ, एनसीसी, प्रभु, सिभिल, एनआईसी एशिया, माछापुच्छ्रे, सेञ्चुरी र सिटिजन्स बैंकको छलाङ्गः पुराना बैंक पुरानै शैलीमा ? -
phd creative writing bath spa girl doing homework anime hunting creative writing help in statistics homework creative writing unique how to helpadyslexic child with homework curriculum vitae medical writer creative writing lecturer vacancies health and social coursework help phd thesis help in bangalore master thesis writing service i do my homework che cosa significa criminal law coursework help jobs teaching creative writing uk i need help writing an essay forascholarship uchicago catalog creative writing creative writing minor miami university best mfa creative writing programs how is monster's resume writing service how to help handicapped person essay creative writing ne demek university of redlands creative writing harvey mudd homework help queen mary creative writing ma nyu creative writing mfa application psychology major creative writing minor help writingathesis for an essay i'll do my homework as soon as i get home roman army homework help best sites for homework help
नेपालमा सञ्चालित २७ वाणिज्य बैंकहरु अझै सञ्चालनमा छन् ती मध्ये केही बैंकहरुले लकडाउन बीचमै छक्का हानेका छन् भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।
सबैभन्दा कान्छो र सानो बैंक भनेर हेपिएको सिभिल बैंक लिमिटेडले यो ६ महिनामा कोरोना कहरबीच डिपोजिट र कर्जामा छलाङ्ग नै मारेको छ भन्दा पत्याउन गाह्रो होला । तर, यो सत्य हो भन्दा फरक पर्दैन ।
भनिन्छ २४ वाणिज्य बैंकहरुले डिपोजिट संकलनमा छलाङ्ग मारेका छन् । भने दुई वटा बाहेक २५ वटा बैंकले कर्जा प्रवाहमा छलाङ्ग नै मारेको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।
सधैं आक्रमक व्यापार व्यवसाय बढाएको सबैभन्दा बढि शाखा सञ्जाल भएको एनआईसी एशिया बैंकले ६ महिना बीचमा २७ वाणिज्य बैंकहरुमा सबैभन्दा बढि कर्जा प्रवाह गरेको भेटिएको छ । सधैं हेपिएको र सानो भनिएको बैंक सिभिल बैंकले समेत कर्जा विस्तारमा छलाङ्ग मारेको भेटिएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।
यति मात्रै होइन पूराना दर्जनौ बैंकहरुलाई चुनौती दिँदै एनसीसी बैंक र प्रभु बैंक लिमिटेडले डिपोजिट संकलन र कर्जा प्रवाहमा अग्रस्थानमा छन् । यो तथ्याङ्कले पुष्टी गरेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघकै तथ्याङ्क हेर्दा २५ वटा वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा प्रवाह र २४ वटा बैंकले डिपोजिट संकलनमा छलाङ्ग नै मारेका छन् भन्दा फरक पर्दैन ।
नेपालमा हाल घर जग्गाको विक्री बढेको, कोरोना कहर केही कम भएको, व्यापार उद्योग सञ्चालनमा आएको कारण बैंकहरुले कर्जा प्रवाह र डिपोजिट संकलनमा छलाङ्ग मारेका छन् भन्दा फरक पर्दैन ।
अब हेरौ कुन वाणिज्य बैंकले कस्तो छलाङ्ग मा¥यो त ।
आक्रमक बजार विस्तारको रणनीति लिएको एनआइसी एशिया बैंक ६ महिनाको अवधिमा झनै आक्रमक देखिएको छ । बैंकले गत असार मसान्तको व्यवसायको आकारलाई पुस मसान्तमा ३२ प्रतिशले बढाएको छ । भन्दा फरक पदैन ।
बैंकले गत असार मसान्तसम्म २ खर्ब १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो । जसमा बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमा ३१.५२ प्रतिशत अर्थात् ६६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँले थप गरी २ खर्ब ७७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुर्याएको भेटिएको छ ।
बैंकले कर्जा प्रवाह समेत ३५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । बैंकले गत असार मसान्तमा १ खर्ब ७३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । पुस मसान्तमा आइपुग्दा ३४.१५ प्रतिशत अर्थात् ५९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ थप कर्जा बढाएर २ खर्ब ३३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुर्याएको भेटिएको छ ।
सिभिल बैंक लिमिटेडले गत असार मसान्तमा ६० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो । पुस मसान्तमा आइपुग्दा २९.२५ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ५९ करोड रुपेयाँले बढेर ७७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुर्याएको भेटिएको छ ।
साथै, बैंक गत असार मसान्तमा ५३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । पुस मसान्तमा २६.३४ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ थप गरेर ६८ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुर्याएको देखिन्छ ।
एनसीसी बैंक लिमिटेडले गत असार मसान्तमा ७९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो । बैंकले पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा २८.३९ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँले निक्षेप थप गरी १ खर्ब २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुर्याएको देखिन्छ ।
साथै, बैंक गत असार मसान्तमा ६९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । पुस मसान्तमा १९.४१ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ थप गरेर ८२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
प्रभु समुहको ठूलो लगानी रहेको प्रभु बैंक लिमिटेडले गत असार मसान्तमा १ खर्ब ३६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो । बैंकले पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा २४.६९ प्रतिशत अर्थात् ३३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँले निक्षेप थप गरी १ खर्ब ७०अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुर्याएको भेटिएको छ ।
प्रभु बैंक लिमिटेडले गत असार मसान्तमा १ खर्ब २४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । भने पुस मसान्तमा २५.४९ प्रतिशत अर्थात् २६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ थप गरेर १ खर्ब २९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ प्रवाह गरेको भेटिएको छ ।
सेञ्चुरी बैंक लिमिटेडले गत असार मसान्तमा ७० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो । बैंकले पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा २२.५८ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँले निक्षेप थप गरी ८६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको देखिन्छ ।
साथै, बैंक गत असार मसान्तमा ६१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । पुस मसान्तमा १७.८७ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ थप गरेर ७२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
सिटिजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेडले चालु आवको पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ९१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकले गत असार मसान्तको भन्दा १६.९५ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ निक्षेप र १२.०६ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह थप गरेको देखिन्छ ।
माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले गत असार मसान्तसम्म १ खर्ब ६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो । बैंकले ६ महिनामा १३.६२ प्रतिशतले निक्षेप संकलन बढाएर १ खर्ब २१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
साथै गत असार मसान्तमा बैंकले ९४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकोमा पुस मासान्तमा १३.३६ प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब ७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडल गत असार मसान्तसम्म १ खर्ब ४५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेकोमा पुस मसान्तमा ११.०२ प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब ६२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
साथै, गत असार मासन्तमा १ खर्ब २७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकोमा पुस मसान्तमा १३.०४ प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब ४४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले गत असार मसान्तमा २ खर्ब २६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेकोमा पुस मसान्तमा १०.८८ प्रतिशतले बढाएर २ खर्ब ५१ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुर्याउको छ । साथै, गत असार मसान्तमा १ खर्ब ९९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकोमा ग्लोबलले पुस मासान्तमा ७. ८५ प्रतिशतले बढाएर २ खर्ब १५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
एनएमबि बैंक लिमिटेडले गत असार मसान्तमा १ खर्ब ३४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेकोमा पुस मसान्तमा आइपुग्दा १०.८४ प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
साथै, बैंकले गत असार मसान्तमा १ खर्ब २१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । पुस मसान्तमा १७.९७ प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
नेपाल बैंक लिमिटेडले गत असार मसान्तमा १ खर्ब ४२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेकोमा पुस मसान्तमा आइपुग्दा ५.७६ प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब ५१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
साथै, बैंकले गत असार मसान्तमा १ खर्ब ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । पुस मसान्तमा १३.८५ प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब २२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
नबिल बैंक लिमिटेडले गत असार मसान्तमा १ खर्ब ९३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेकोमा पुस मसान्तमा आइपुग्दा ५.४३ प्रतिशतले बढाएर २ खर्ब ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । साथै, बैंकले गत असार मसान्तमा १ खर्ब ५३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो ।
पुस मसान्तमा १६.६८ प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुर्याएको भेटिएको छ ।
लक्ष्मी बैंक लिमिटेडले गत असार मसान्तमा १ खर्ब १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेकोमा पुस मसान्तमा आइपुग्दा ५.२२ प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब ६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुर्याएको देखिन्छ ।
साथै, बैंकले गत असार मसान्तमा ९० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । पुस मसान्तमा ५.०७ प्रतिशतले बढाएर ९५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
हिमालयन बैंक लिमिटेडले गत असार मसान्तमा १ खर्ब ३१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो । पुस मसान्तमा आइपुग्दा बैंकले ५. १० प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब ३८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुर्याएको देखिन्छ ।
साथै, बैंकले गत असार मसान्तमा १ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । पुस मसान्तमा ६.८५ प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब १५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
प्राइम कर्मशिलय बैंक लिमिटेडले गत असार मसान्तमा १ खर्ब २९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो । पुस मसान्तमा आइपुग्दा बैंकले ४.७० प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब ३५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । साथै, बैंकले गत असार मसान्तमा १ खर्ब १४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । पुस मसान्तमा ९.०४ प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुर्याएको देखिन्छ ।
एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले गत असार मसान्तमा १ खर्ब ४४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो । पुस मसान्तमा आइपुग्दा बैंकले ४.५७ प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब ५१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
साथै, बैंकले गत असार मसान्तमा १ खर्ब १८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । पुस मसान्तमा ०.९४ प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब १९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
कुमारी बैंक लिमिटेडले गत असार मसान्तमा १ खर्ब २४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो । पुस मसान्तमा आइपुग्दा बैंकले ४.५३ प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब २९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । साथै, बैंकले गत असार मसान्तमा १ खर्ब १५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । पुस मसान्तमा ४.५८ प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
सनराइज बैंक लिमिटेडले गत असार मसान्तमा ९४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो । पुस मसान्तमा आइपुग्दा बैंकले ३.९२ प्रतिशतले बढाएर ९८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
साथै, बैंकले गत असार मसान्तमा ८३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । पुस मसान्तमा ६.७९ प्रतिशतले बढाएर ८९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले गत असार मसान्तमा २ खर्ब ३२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो । पुस मसान्तमा आइपुग्दा बैंकले ३.५१ प्रतिशतले बढाएर २ खर्ब ४१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । साथै, बैंकले गत असार मसान्तमा १ खर्ब ५६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । पुस मसान्तमा ११.४९ प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब ७४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
मेगा बैंक लिमिटेडले गत असार मसान्तमा मेगा बैंकले १ खर्ब ३१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो । पुस मसान्तमा आइपुग्दा बैंकले ३.१० प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब ३५ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
साथै, बैंकले गत असार मसान्तमा १ खर्ब १३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । पुस मसान्तमा १२.१५ प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब २७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडले गत असार मसान्तमा ९३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो । पुस मसान्तमा आइपुग्दा बैंकले २.११ प्रतिशतले बढाएर ९५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । साथै, बैंकले गत असार मसान्तमा ८२ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । पुस मसान्तमा १०.५० प्रतिशतले बढाएर ९१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
सानिमा बैंक लिमिटेडले गत असार मसान्तमा १ खर्ब १० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो । पुस मसान्तमा आइपुग्दा बैंकले १.५४ प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब ११ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
साथै, बैंकले गत असार मसान्तमा ९३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । पुस मसान्तमा १२.१७ प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब ४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
कृषि विकास बैंक लिमिटेडले गत असार मसान्तमा १ खर्ब ४३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो । पुस मसान्तमा आइपुग्दा बैंकले ०.३३ प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब ४४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
साथै, बैंकले गत असार मसान्तमा १ खर्ब २३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । पुस मसान्तमा ७.२० प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब ३२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडले गत असार मसान्तमा १ खर्ब ६८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो । पुस मसान्तमा आइपुग्दा बैंकले ०.३१ प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब ६९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
साथै, बैंकले गत असार मसान्तमा १ खर्ब ४४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । पुस मसान्तमा २.१७ प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब ४७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेडले गत असार मसान्तमा नेपाल बंगलादेश बैंकले ७३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो । पुस मसान्तमा आइपुग्दा बैंकले ०.४८ प्रतिशतले निक्षेप घटाएर ७२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँमा सीमित गरेको छ ।
साथै, बैंकले गत असार मसान्तमा ६१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । पुस मसान्तमा १.३९ प्रतिशतले बढाएर ६२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
नेपाल एसबिआइ बैंक लिमिटेडले गत असार मसान्तमा १ खर्ब १० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो । पुस मसान्तमा आइपुग्दा बैंकले ६.५० प्रतिशतले निक्षेप घटाएर १ खर्ब ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँमा सीमित गरेको छ ।
साथै, बैंकले गत असार मसान्तमा ९४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । पुस मसान्तमा १.५१ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह घटाएर ९२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँमा सिमित गरेको छ ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडले गत असार मसान्तमा ९९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो । पुस मसान्तमा आइपुग्दा बैंकले १२.३९ प्रतिशतले निक्षेप घटाएर ८६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँमा सीमित गरेको छ ।
साथै, बैंकले गत असार मसान्तमा ५७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । पुस मसान्तमा २.६८ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह घटाएर ५५ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमा सिमित गरेको छ ।
नेपालका यी वाणिज्य बैंकहरुले समग्रमा कोरोना कहर बीच पनि राम्रो र आश्चर्यजनक प्रगति गरेका छन् भन्दा फरक पदैन । सचेत भया । आर्थिक बजार राष्ट्रिय मासिक माघ अंकबाट साभार गरिएको